ABC भनेको के हो? | Martech Zone परिवर्णी शब्द
Martech Zone » परिवर्णी शब्द » A बाट सुरु हुने परिवर्णी शब्द	» ए बी सी
ABC को संक्षिप्त रूप हो सधैं बन्द रहनुहोस्.
यो तपाईंले युवा बिक्री प्रतिनिधिको रूपमा सिक्नु पर्ने बिक्री संक्षिप्त शब्दहरू मध्ये पहिलो हो! यो काम गर्ने तरिका धेरै धेरै छ। एक प्रभावकारी विक्रेता हुनको लागि तपाईलाई ABC आवश्यक पर्दछ।